Dadka internetka isticmaala oo laga qaadayo lacagta telefishinka | Somaliska
Dadka internetka isticmaala oo laga qaadayo lacagta telefishinka
Maxkamada ku taala magaalada Luleå (förvaltningsdomstol) ee waqooyiga Sweden ayaa go’aamisay in dadka TV-ga ka daawada Internetka ay waajibtahay in ay bixiyaan lacagta telefishinka ee hada laga qaado dadka telefishinka u yaalo. Maxkamada ayaa amartay in haddii qofka uu internet ugu jiro ay waajibtahay in uu bixiyo lacagta maadaama uu internetka ka daawan karo telefishinka.
Go’aanka maxkamada ayaa ka dhigaya in dhamaan dadka internetka isticmaala ay bixiyaan lacagta telefishinka xitaa haddii aysan internetka ka daawan telefishinada sida SVT 1, SVT2 iyo kuwa la midka ah. Iyadoo ay horay dad badan dhibaato ugu qabeen bixinta lacagta telefishinka isla markaana ay dhowr jeer ka dacwoodeen in uusan telefishinka u yaalin guriga ayaa go’aankaan maxkamada waxa uu guud ahaan meesha ka saarayaa marmarsiyahaas, iyadoo hada ay waajibtahay in qofkasta uu bixiyo lacagta.
Shirkada Radiotjänst oo qaabilsan ururinta lacagta telefishinka ayaa sheegtay in ay sidii hore ku wadayaan qaabka ay lacagta u qaadayaan iyagoo dadka telefoon ku wici doona ama guriga ku booqan doono si ay uga dalbadaan in ay lacagta bixiyaan. Go’aanka maxkamada ayaa la filayaa in uu aad u kordhiyo dhaqaalaha ay Radiotjänst ka qaado dadka.
Sweden oo soo dhaweysay geerida Usama Bin Laden
Taasi waxee noqoneesa diktitoornimo cad oo lagu dulmayo dadka maxaayeelay waxee rabaan inee dhaqaalahooda xoojiyaan marka waa dagaal caadi ah.
Asc bro jimcale sxb weli waxaan ku weydiinayaa arinta2 sano bro min fadlak ii jawaab waayo ah arin aan saacan o ay ii tahay waqti danbe ka hoyan waaye waaye bro marka adoo i ixtiraamay iina eegaya in aan ahay aabe ii sheeg weli diidmafan maxay u sii socotaa hadiiba go,aan uu ka soo baxay mana nagu caawin kartaa in aad soo ogaaato hadaadan hada war ka heen bro waa walaalkaa muslima kuleh fikirkaaga nagu caawi asc